Madaxweynaha Mamulka Khaatumo State Prof Galaydh Oo Gaadhay Dalka Kenya Iyo Shirar Calami Ah Oo Uga Qayb Galayo..
Jaaliyadda ssc Khatumo2 Wararka Wikileaks May 24, 2017
London(Allssc):Madaxweynaha Khaatumo ayaa diyaarad yari ka qaadya garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta taasoo u duuleysay magaalada Navahsa oo 110KM Galbeed ka xigta Nairobi, magaaladan oo ah gooi dalxiiseed lagu qabto shirarka caalamiga ah ayaa waxa ka furmay shirweyne hay’adaha caalamiga ahi u qabteen deegaamada Khaatumo.
Waxana wararku sheegayaan in qudbad dheer uu ka jeedin doono Madaxweyne Galaydh taasoo ku saabsan dhibatada baahsan ee deegamadaas ka dhacday, wuxuuna sidoo kale ka warami doonaa dibudhaca kaabayaasha dhaqaalaha, baahida maamul fidinta, xuquuqda aadanaha iyo arimo kale oo dhawr ah.
Wararka ayaa ogaatay in shirkani ka dhashay waftigii ka socdey Maraykanka ee tagay Buuhoodle, kuwaasoo abaabul dhanka hay’adaha iyo gaadhsiin dhawaqa shacabka reer Khaatumo ee hareeraysan ah gaadhsiiyey dunida.
Waxaana laga yabaa inay ka soo baxaan waxyaalo waaweyn oo wax ka bedela mandaqada Khaatumo horumarkeeda iyo nolosheeda, sida biyaha, wadooyinka, cunooyinka,dawooyinka iyo arimo kale oo ay ka mid tahay taageerida laamaha maamulka Khaatumo.
Tagged featuredkenyamadaxweynaha khatumo hargaysanairobiwararkawararkii ugud anbeeyay khaatumowaraysiyada